नेकपाको सचिवालय बैठक शुरु, कार्यदलको म्याद थपिएला ? « Khabarhub
नेकपाको सचिवालय बैठक शुरु, कार्यदलको म्याद थपिएला ?
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी एकीकरणको निम्ति सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलको म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल गर्न सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठक शुरु भएको छ ।
बालुवाटारमा केही बेर अघि शुरु भएको बैठकमा कार्यदलको म्याद थप पर्ने वा नगर्ने विषयको छलफल हुनेछ ।
विहीबारको बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुले कार्यदलको समय एक हप्ता थप गर्न माग गरेका थिए । विहीवार नै कार्यदलसँग संयुक्त बैठकपछि बसेको सचिबालयको बैठकले कार्यदलको समय थप गर्ने विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन ।
संयुक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुले अहिलेसम्म गरेको काम, देखिएको समस्याका विषयमा आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
गत मंसिमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकतामा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदलले तोकिएको मितिमा पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि अपूरो प्रतिवेदन सचिबालयमा बुझाएको थियो ।
प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ११ : ०८ बजे